တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ဖျင် က တရုတ်သည် စစ်ကို မကြောက်ဟု ဆိုလိုက်ပြီး တရုတ်သမ္မတ၏ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်သည် အမေရိကန်ကို ရည်ညွှန်းပုံရ
a fella | 23/10/2020 | News | No Comments
ယနေ့တွင် (အောက်တိုဘာ ၂၃) သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်က တရုတ်သည် စစ်ပွဲကို မကြောက်ဘဲ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများအပေါ် ထိပါးသည့် ကိစ္စများကို ဘယ်သောအခါမှ ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။
ရှီသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တင်းမာမှုများမြင့် တက်နေချိန်တွင် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ပေကျင်းရှိ ပြည်သူ့ခန်းမ၌ မိန့်ခွန်းပြောကြာစဉ် တစ်ဖက်သတ်ဝါဒ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်တို့သည် အလုပ်မဖြစ်တော့ဘဲ အဆုံးသတ်သွား စေလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဖခင် မော်စီတုန်းကို ကိုးကား၍ ” တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ယခုအခါ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခံပြီး လှည့်ဖြား၍ မရတော့ကြောင်း ကမ္ဘာက သိအောင်လုပ်ပါ” ဟု ဆိုသည်။
သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်သည် အမေရိကန်ကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်းခြင်း မရှိသော်လည်း သွယ်ဝိုက်ပြောနေသလားဟု တွေးတောစရာ ဖြစ်နေသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စီးပွားရေး နိုင်ငံနှစ်ခုသည် ကုန်သွယ်ရေး, နည်းပညာနှင့် လုံခြုံရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုမှ အခွင့်အရေးနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အထိ ပြဿများစွာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်အပေါ် ထရမ့်ပ်၏ ခက်ခဲသော ရပ်တည်ချက်များသည် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒုတိယသက်တမ်း အနိုင်ရရန် သူ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အဓိကလက်နက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
“ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၇၀ က နယ်ချဲ့ကျူးကျော် ဝင်ရောက်သူတွေက တရုတ် နိုင်ငံသစ်ရဲ့ လှေကားထစ်တွေကို ချိုးဖျက်ခဲ့ကြတယ်” ဟု ရှီ၏ စကားကို ကိုးကားလျက် SCMP သတင်းစာမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ တရုတ်လူမျိုးများတွေ အနေနဲ့ ကျူးကျော်သူတွေ နားလည်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို သုံးရမယ်။ စစ်ကိုစစ်နဲ့ ပြန်တိုက်ဖို့နဲ့ ကျူးကျော်မှုတွေကို တားဆီးရလိမ့်မယ်။ အောင်ပွဲကနေ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံမှုကို ရယူရမယ်။
တရုတ်လူမျိုးတွေက ပြဿနာကို မဖန်တီးသလို ကြောက်နေမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိပါစေ၊ ငါတို့ ကြောက်ဒူးတုန်နေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ ကျောကုန်းလည်း ကွေးညွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး ”ဟု ရှီက မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီက ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ စစ်တပ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် တိုင်းပြည်၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်များအား ခေတ်မီရေး လုပ်ဆောင်ရန်ု လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြဖငျြ က တရုတျသညျ စဈကို မကွောကျဟု ဆိုလိုကျပွီး တရုတျသမ်မတ၏ အမြိုးသားရေးစိတျဓာတျသညျ အမရေိကနျကို ရညျညှနျးပုံရ
ယနတှေ့ငျ (အောကျတိုဘာ ၂၃) သမ်မတရှီကငျြ့ဖငျြက တရုတျသညျ စဈပှဲကို မကွောကျဘဲ နိုငျငံ၏ အခြုပျအခွာအာဏာ၊ လုံခွုံရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဆိုငျရာ အကြိုးစီးပှားမြားအပျေါ ထိပါးသညျ့ ကိစ်စမြားကို ဘယျသောအခါမှ ခှငျ့ပွုလိမျ့မညျ မဟုတျဟု သတိပေးပွောကွားလိုကျသညျ။
ရှီသညျ အမရေိကနျနိုငျငံနှငျ့ တငျးမာမှုမြားမွငျ့ တကျနခြေိနျတှငျ ကိုရီးယားစဈပှဲ အထိမျးအမှတျ အဖွဈ ပကေငျြးရှိ ပွညျသူ့ခနျးမ၌ မိနျ့ခှနျးပွောကွာစဉျ တဈဖကျသတျဝါဒ၊ လကျဝါးကွီးအုပျခွငျးနှငျ့ အနိုငျကငျြ့ခွငျတို့သညျ အလုပျမဖွဈတော့ဘဲ အဆုံးသတျသှား စလေိမျ့မညျဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။
ရှီသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၏ ဖခငျ မျောစီတုနျးကို ကိုးကား၍ ” တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံသညျ ယခုအခါ စညျးရုံးသိမျးသှငျးခံပွီး လှညျ့ဖွား၍ မရတော့ကွောငျး ကမ်ဘာက သိအောငျလုပျပါ” ဟု ဆိုသညျ။
သမ်မတရှီကငျြ့ဖငျြသညျ အမရေိကနျကို တိုကျရိုကျ ရညျညှနျးခွငျး မရှိသျောလညျး သှယျဝိုကျပွောနသေလားဟု တှေးတောစရာ ဖွဈနသေညျ။
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စီးပှားရေး နိုငျငံနှဈခုသညျ ကုနျသှယျရေး, နညျးပညာနှငျ့ လုံခွုံရေး ပွိုငျဆိုငျမှုမှ အခှငျ့အရေးနှငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအထိ ပွဿမြားစှာ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျခဲ့ကွသညျ။
တရုတျအပျေါ ထရမျ့ပျ၏ ခကျခဲသော ရပျတညျခကျြမြားသညျ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ သမ်မတရှေးကောကျပှဲအတှကျ ဒုတိယသကျတမျး အနိုငျရရနျ သူ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အဓိကလကျနကျ ဖွဈခဲ့သညျ။
“ လှနျခဲ့တဲ့အနှဈ ၇၀ က နယျခြဲ့ကြူးကြျော ဝငျရောကျသူတှကေ တရုတျ နိုငျငံသဈရဲ့ လှကေားထဈတှကေို ခြိုးဖကျြခဲ့ကွတယျ” ဟု ရှီ၏ စကားကို ကိုးကားလကျြ SCMP သတငျးစာမှ ဖျောပွခဲ့သညျ။
“ တရုတျလူမြိုးမြားတှေ အနနေဲ့ ကြူးကြျောသူတှေ နားလညျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို သုံးရမယျ။ စဈကိုစဈနဲ့ ပွနျတိုကျဖို့နဲ့ ကြူးကြျောမှုတှကေို တားဆီးရလိမျ့မယျ။ အောငျပှဲကနေ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ လုံခွုံမှုကို ရယူရမယျ။
တရုတျလူမြိုးတှကေ ပွဿနာကို မဖနျတီးသလို ကွောကျနမှောလညျး မဟုတျဘူး။ ငါတို့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ စိနျချေါမှုတှေ ဘယျလိုပဲ ရှိပါစေ၊ ငါတို့ ကွောကျဒူးတုနျနမှော မဟုတျဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ ကြောကုနျးလညျး ကှေးညှတျမှာမဟုတျဘူး ”ဟု ရှီက မိနျ့ခှနျးတှငျ ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့သညျ။
ရှီက ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီ စဈတပျတဈခု ဖနျတီးရနျ တိုငျးပွညျ၏ ကာကှယျရေးနှငျ့ လကျနကျကိုငျ တပျမြားအား ခတျေမီရေး လုပျဆောငျရနျု လိုအပျကွောငျးကိုလညျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
ရုရှားနဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြားက ဆက်ဆံရေးတွေကို ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ ဖိအားပေးပြီး ခွဲခြားပစ်လို့မရဘူးလို့ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးပြော ( အရေးကြုံတဲအချိန် ဘယ်သူကမိတ်တွေစစ်လဲ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ….)
ဗီယက်နမ်ကို လက်နက်တွေရောင်းချပေးမယ့်အပြင် စစ်ဖက်နည်းပညာတွေပါ လွှဲပြောင်းပေးအုံးမယ့် ဂျပန် ( အမေရိကန်က ထိုင်ဝမ်ကို ကူတယ် ဂျပန်က ဗီယက်နမ်ကို လက်နက်နဲ့နည်းပညာ ကူတယ် သာကောကို ရှေ့နောက်ပိတ်ညပ်လိုက်ပြီ ဘာဆက်လုပ်မလဲ သာကော)
အမေရိကန် သမ္မတအသစ် အဖြစ် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကို တရုတ်တို့ ဘယ်အချိန်မှ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုမှာလဲ…?
“တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရဟတ်ယာဉ်တင် ကုန်းရေနှစ်သွယ် တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရေယာဉ် Type 075 အား ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီး တွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုခြင်း” ( အမေရိကန်တို့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ကြုံနေချိန် ထိုင်ဝမ်အပေါ် တရုတ်ကြီး အခွင့်ကောင်းယူဖို့ ကြံနေပြီလား….)